एजेन्सी – सन् २०१९/२० सिजनका लागि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले नयाँ जर्सी लगाउने भएको छ । बार्सिलोनाले नयाँ सिजनमा परम्परागत शैलीभन्दा फरक जर्सीको नमुना तयार पारेको स्पेनिस मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन् ।
बार्सिलोनाले पछिल्लो १ सय १८ बर्षे इतिहासमा घरेलु जर्सीको रुपमा नयाँ डिजाइन बदल्न लागेको हो । बार्सिलोना आफ्नो निलो र रातो धर्के जर्सीले प्रसिद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार सन् २०१९ पछि बार्साको इतिहासमा पहिलो पटक जर्सिमा पुर्ण रुपमा एकै रंगको रेखा हुने छैन् । बार्साले क्रोएसियाको राष्ट्रिय टिम जस्तै आफ्नो जर्सीमा पनि वर्गाकार कोठा राख्ने जमर्को गरेको छ । क्लबले घरेलु जर्सीमा चेकर्ड प्याटर्नमा जर्सि प्रयोग गर्न लागेको हो ।
सामाजिक संजालमा केहि स्रोतले सार्वजनिक गरेको जर्सीको नमुना क्लब वा जर्सी निर्माता नाइकले आधिकारिक पुष्टि भने गरेका छैनन् । स्पेनको मिडिया ‘स्पोर्ट’का अनुसार नयाँ डिजाइन अबलम्बन गर्ने नाइकले अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । नाइकसँग जर्सी उत्पादन गर्न छ महिनाको आवश्यक रहने भएकाले हाल बार्सिलोनाले औपचारिक फैसला गर्न समय लिनेछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५०८:४१
केहीबेरमा नेपाल र हङकङबीच खेल हुँदै: ‘गर या मर’ को स्थिति, यदि नेपालले आज पनि हारे के हुन्छ ?
अपराजित युभेन्टसले सम्पडोरियासँग आज राति खेल्दै
सन्दिपलाई भ्याइ न-भ्याइ : ‘बिग बास लिग’ बिचैमा छोडेर सन्दीप बङ्गलादेश प्रस्थान !
विश्वकपः सेमिफाइनल मंगलबारदेखि : उपाधि युरोपभन्दा बाहिर नजाने पक्का !